CAINE 9.0 inowanikwa kurodha pasi uye kumisikidza | Linux Vakapindwa muropa
CAINI Iyo inozivikanwa kugoverwa kweGNU / Linux uye tatove tataura nezvazvo pane dzimwe nguva muLxA. Iyo ndeimwe yemazhinji ekuparadzirwa kweLinux yakanangana nekuchengetedzwa kwemakomputa, kunyanya yakagadzirirwa kuongororwa kwe data. Chidimbu chayo chinomiririra Komputa Yatsigirwa INvestigative Zvakatipoteredza, uye sezvavanonyatsoratidza, inzvimbo huru yekuferefeta nezvezvombo zvese zvekushandisa kuti zviongorore zvagara zviripo kare.
Mushure mekunge rinenge gore kubva payakaziviswa CAINE 8.0, ivo vanogadzira vanga vachinyarara vachishanda zvakaomarara uye nesimba kuti ikozvino tikwanise kunakidzwa KAINE 9.0. Icho ichiri chakazara suite yaive distro mune ayo apfuura vhezheni asi aine akawanda matsva maficha uye mitsva iwe yaungade uye izvo zvichavandudza basa revashandi vekuchengetedza. Uye kana iwe uri mumwe wavo, unogona kudhawunirodha Live (64-bit chete) kubva ku webhusaiti yepamutemo yeprojekti pamusoro pekuwana zvinyorwa uye runyorwa rwezvishandiso zvinosanganisirwa ... Vaya vane basa rekusimudzira kweiyi sisitimu yekushandisa vanga vachida kuramba vachipa vashandisi maturusi akanyanya muCAINE 9.0 uye pakati penyaya dzatava nadzo iyi Nyowani Kuburitswa. yakavakirwa paUbuntu 16.04 LTS uye inoshandisa Linux kernel 4.4.0-97, inokwanisa kushanda pane chero sisitimu ine UEFI uye Yakachengeteka Boot pasina matambudziko, pamwe neBIOS (kana Legacy modhi) uye iine madhiraivha azvino eazvino Hardware.
Zviuru zve zvishandiso zvakagadziridzwa kune yazvino vhezheni dzadzo, senge VolDiff, RegRipper, Safecopy, PFF Zvishandiso, Mouseemu, Infoga, TheHarvester, Tinfoleak, uye yakareba etc. Uyezve, zvinyorwa zvitsva zvakaverengerwa, pamwe nekugadziriswa kwezvikanganiso zvakawanikwa mushanduro dzakapfuura senguva dzose. Uye sekuwedzera chengetedzo, CAINE's SSH Server yakaremara nekutadza, kana iwe uchida kuishandisa iwe uchafanirwa kuimisikidza, asi ichave isinga shande nekutadza kudzivirira matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » CAINE 9.0 inowanikwa kurodha pasi uye kumisikidza
Dan Castillo akadaro
Ndiri kufarira kudzidza zvakawanda nezve computer forensics, Ethical Kubiridzira uye kunyangwe kuronga.
Pindura Dan Castillo